Archive du 18-janv-2022
Trafikana volamena Malagasy iray sy Arabo iray no atidoha
Noho ny antony ara-penitra ara-pahasalamana dia omaly ny minisitry ny fitsarana, Imbiki Herilaza, vao afaka nanao ny tatitra momba ny diany tatsy Kaomoro ho famerenana eto an-tanindrazana ireo malagasy miisa roa voarohirohy
Toy ny tany miady
Araka ny efa nanampoizana azy. Fihetsiketsehana izao hita tao Andekaleka tao izao, herinandro hatramin’ny omaly izay. Inona akory anefa no teo?
Andranonahoatra Naverina namboarina ilay arabe “bonbon voanjo”
Tsy azo handehanana indray ny lalana avy eo an-tampon’Itaosy midina eo Andranonahoatra efa ho andro maromaro izao.
Fifikirana amin’ny fahefana Misy te hanova mafy ny lalampanorenana
Ny kabarin’ny Filoham-pirenena ny 31 desambra 2021 hariva no nanomboka naha be resaka ny amin’ny fe-potoam-piasan’ny Filohan’ny Repoblika.
Fivarotana Cocaine Olona 2 tratry ny vela-pandriky ny polisy
Olona roa no voasambotry ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahafito ny 17 janoary lasa teo teny amin’ny faritra 67 ha tokony ho tamin’ny 09 ora maraina noho ny resaka zava-mahadomelina.
Vaksiny iadiana amin’ny coronavirus Ny fihetsiky ny mpitondra no mampisalasala ny vahoaka
Mihena ireo mararin'ny Covid-19 eny anivon'ny CTC-19 hoy ny ministry ny Fahasalamam-bahoaka ny profesora Randriamanantany Zely Arivelo omaly .
Jeneraly Herilanto Raveloharison Nodimandry teo amin’ny faha 64 taonany
Nodimandry omaly maraina ny général de corps d'armée, Herilanto Raveloharison, rehefa nivahiny 64 taona teto an-tany.
Endrika faharavan’ny fiarahamonina Notetehiny sy norasarasainy ny vadiny
Novonoina lehilahy iray tamin’ny fomba feno habibiana ny vadiny ny alin`ny 15 Janoary lasa teo tao Andrahanana, Distrikan’i Maroantsetra. Notetitetehany ny tanany, norasarasainy ny lohany sy ny vatany manontolo.
Ben’ny tanànan’Ivato Asa avy hatrany no nisantarana ny taona vaovao
Vao manomboka ny taona 2022 dia efa asa ny an’ny ben’ny tanànan’Ivato Penjy Randrianarisoa. Nosantariny tamin’ny asa fanamboaran-dalana izany omaly.